Mombamomba ny orinasa - Jinan Tianda Textile Technology Co., Ltd.
Izahay dia mitazona aingam-panahy ho an'ny trano, mampifandray ny asa famoronana nataon'ireo mpanao asa tanana sy mpamorona amin'ny olona
sy ny toerana eran'izao tontolo izao.
Miaraka amin'ireo magazay miisa 100 sy mpiara-miombon'antoka amin'ny franchise ao amin'ny firenena 9, dia toeran-jaza iraisam-pirenena izahay ho an'ny fanaka sy kojakoja ary haingon-trano maoderina sy maoderina izay manampy ny olona Tongasoa Fiainana.
Ny marika fomba fiainantsika dia manolotra fiainana feno aingam-panahy amin'ny alàlan'ny vokatra avo lenta, endrika manokana ary fomba tsy manam-potoana - ampiasain'ny fitaovana famolavolana nomerika sy sary an-tsary izay manome vahaolana miantsena tsy misy tohiny eny amin'ny magazay sy amin'ny Internet.
Miaraka amin'ny hatsarana kanto maritrano, tontolon'ny magazay misy traikefa ary vondrom-piarahamonina an-tserasera, izahay dia miara-miasa amin'ny mpanjifantsika amin'ny alàlan'ny haino aman-jery sosialy, fivarotana finday, serivisy famolavolana, firaketana fanomezana ary maro hafa.
Fomba tsara kokoa hiantsenana amin'ny Internet amin'ny fanaka, haingon-trano ary maro hafa!
Izahay dia manangona sy mandamina ny tsara indrindra amin'ny kalitao sy ny fomba ho anao sy ny tranonao.
Maninona no mandany andro mitondra fiara amin'ny magazay mankany amin'ny magazay mitady izany endrika tonga lafatra izany na singa tsy manam-paharoa. Tadiavo izay rehetra tadiavinao sy bebe kokoa amin'ny fampiononana ao an-tranonao manokana.
Tsy irery ianao. Manomboka amin'ny fizahana, ka hatramin'ny famandrihana, na amin'ny fandefasana ... eto izahay hanampy anao isaky ny mandeha. Ny ekipan'ny fikarakaranay mpanjifa dia afaka mamaly ny fanontaniana mety anananao, ary koa manome fanampiana manokana ho an'ny: fandaharam-potoana, fividianana, baiko betsaka, baiko manokana ary safidy fanaterana.
Plus isika dia orinasa sinoa mirehareha! Ny vidiny rehetra dia amin'ny vola CAD ary tsy hahita adidy tsy ampoizina na vidin'ny fifanakalozana ianao amin'ny fizahana.
Miantsena amin'ny fividianana fanaka an-trano sy haingo an-trano fatratra ho an'ny efitrano rehetra, miampy karazana kidoro, fitaovana ary fitaovana elektronika amin'ny vidiny tsy azo resena! Tadiavo ny zavatra rehetra tadiavinao amin'ny fiononan'ny tranonao.
Miantsena amin-toky! Ny antoka momba ny fahafaham-po sy ny fampanantenan'ny vidin'ny lalao dia manome toky anao fa faly amin'ny fividiananao ianao.